Nezvedu - Shijiazhuang Kunxiangda Technology Co., Ltd.
Fonera Us: 0086-18731103336
Shijiazhuang Kunxiangda Technology Co, Ltd. hwakagadzwa muna 2013. isu tiri nyanzvi gadzira yemishonga intermediates uye yekutengesa kambani yedhayi vepakati, uye mamwe makemikari mbishi zvinhu. Fekitori yedu iri mune zvehupfumi uye Tekinoroji Yekuvandudza Nzvimbo yeShijiazhuang guta, Hebei dunhu. Nzvimbo dzese dzinenge mahekita makumi mashanu, uye kune vanodarika mazana matatu vashandi, kusanganisira vapfumbamwe vevashandi.
Isu tinonyanya kugadzira 1,3-dimethylurea (DMU) uye tinoita bhizinesi neMethylurea (MU), 6-Amino-1,3-dimethyluracil (DMAU), 6-Chloro-3-methyluracil (CMU), 6-Chloro-1, 3-dimethyluracil (CDU), Sodium Cumenesulfonate (DMS), Ethylene glycol diformate (EGDF) uye mamwe emishonga yemishonga uye dhayi epakati. Isu takamisa timu yekutenga yehunyanzvi kubatsira vazhinji vatengi vekunze kuti vawane vatengi vakakodzera uye vakakodzera mumusika weChina. Uye takave vakabvumirana kuzivikanwa vatengi. Pakati peanenge makore gumi ruzivo, isu tine mukurumbira wakanaka pakati pevakuru nevatsva vatengi. Zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope, South America, Asia, Middle East nedzimwe nyika dzenyika nematunhu, uye zvakare yakasimbisa yakakura uye yakagadzikana kushambadzira network.
Isu takagadzira zvakare hukama hweshure hwekudyidzana neTsinghua University uye Hebei University yeSainzi neTekinoroji yekuvandudza tekinoroji yezvigadzirwa zviripo, kudzikisa mutengo, kunatsiridza mhando, uye kuona kuti danho rehunyanzvi riri kutungamira kumba nekune dzimwe nyika. nguva imwecheteyo, isu tinoramba tichivandudza zvigadzirwa zvitsva kusimudzira kusimudzira kwekusimudzira kwekambani.Companies inonamatira kune pfungwa yekuenderana, kuvimbika, kusimudzira, kuhwina-kuhwina, tenda zvakasimba kuti mhando hupenyu hwebhizinesi, kupa vatengi mhando masevhisi echinangwa chebhizinesi.
Isu tinogara tichiedza kuve shamwari yakatendeka yevatengi vedu, uye tinoedza kuvaka mutengi-anovimbwa, anoremekedzwa munharaunda, wepasi rose kirasi yakanaka yekugadzira kemikari! Ndinovimba tinogona kuva nevamwe vakanaka vakaroorana kubva kumativi ese epasi! Uye isu tiri kutarisira kushanya kwako!
Wedzera: indasitiri nzvimbo tangqiaotang zhang jiagang guta china